Uxoxwa ngemizwa ehlukene umlando wezifonyo esezichithiwe
ININGIZIMU Afrika isiqede ngokusemthethweni yonke imithetho eyamene neCovid-19 ezweni, okuhlanganisa ukugqokwa kwezifonyo ngaphakathi ezakhiweni ezizimele nasezindaweni zomphakathi, imigomo yemibuthano, nokuhlolwa kwemingcele.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi uNgqongqoshe wezeMpilo, uMnuz Joe Phaahla, echithile le mithetho wase eshicilela isinqumo kusomqulu kahulumeni.
“Mina, Mathume Joseph Phaahla, uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke, ngalokhu ngichitha imithetho 16A, 16B no-16C ephathelene nokubhekwa nokulawulwa kwezimo zezempilo eziqashelwayo, ezenziwe ngokwesiGaba 90(1)(1), (k) no (w) soMthetho wezeMpilo kaZwelonke, wango-2003.”
Kuhlukene imibono ngalezi zinguquko. Nakhu ukuphawula kwabafundi:
Carol Mlambo uthe: “Ngiyasifaka etekisini isifonyo...bayakhwehlela abantu, lapho-ke bavale amawindi. Ngale kweCovid-19, ngisaba isifo sofuba.”
Dhlamini Zinhle ZN wathi: “Ngizosifaka manginqena ukubingelela.”
Zinhle KamaNene INtombi YakwaMbokazi ubeke kanje: “Ngizohlezi nginaso esikhwameni ngine-sinus. Sibuye singisize kakhulu etekisini uma kunomuntu obebhemayo, sekunuka ugwayi. Kanti namanye amakha ayingixaka, yingakho ngizoqhubeka naso ukugwema ukuthimula njalo.”
Ntandorh Innocent Ndlovu uthi: “Hhayi mina ngijabulile. Umuntu angaze abulawe nayiphunga lomlomo, kwisifonyo likhuphukela ekhaleni.”
Samukelisiwe Msomi uthe: “Ngeke ngiyeke ukusifaka, siyangisiza ekuvikeleni umkhuhlane manafinyila ekuseni esitobhini.“
Buyiswa Lugayeni wathi: “Isifonyo besinesidina kodwa kwelinye icala silungile kwabanomkhuhlane, siyabavikela njengoba kungena ubusika.”
Pj Powers Ngubane uthe: “Mina ngiyakubona konke, kodwa bese zilekelela kakhulu kulaba bantu abangasebenzi ebebezidayisela zona ngoR5 ezinxanxatheleni yezitolo!”